Safaarada Shiinaha oo dib loo furay - Wargeyska Faafiye
Safaarada Shiinaha oo dib loo furay
madaxweeynaha Jamhuuriyada Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta dib u furay safaaradda dowladda Shiinaha ee Soomaaliya kaddib munaasabad lagu qabtay xarunta Safaaradda ee Muqdisho.
Xafladdan kuu saabsaneyd did u furista safaaradda Shiinaha ee Soomaaliya waxaa kaloo ka qeyb galay wasiirka arrimaha dibedda, Wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha, Danjirayaal, diblomaasiyin, saraakiil iyo marti sharaf kale.
Safiirka dowladda Shiinaha u fadhiya Soomaaliya Wei-Hongtian oo Soomaalidu ay u taqaano Warsame kuna hadlayay Afka Soomaaliga ayaa sheegay in kan Safiir ahaan uu si xoojin doono xiriirka qotada dheer ee ka dhaxeeya labada dal.
“Waxaan farxad weyn ii ah in maanta la ii magacaabay danjiraha Shiinaha u fadhiya Soomaaliya, magaalada Muqdisho waa magaaladii aan ku qalin jebiyay gaar ahaan Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed oo dhawaan dib loo howlgeliyay, tankale waxaan hortiina ku balan qaadayaa in aan ka shaqeynayo xiriirka diblomaasiyadeed ee Shiinaha iyo Soomaaliya” ayuu yiri danjiraha Shiinaha ee Soomaaliya.
Wasiirka arrimaha dibadda iyo dhiiragelinta maalgashiga ee xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa uga mahadceliyay dowladda Shiinaha sida ay mar waliba u garab taagantahay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladooda, waxaa intaa ku daray in wasaaradaha arrimaha dibadda ee dalalka Soomaaliya iyo Shiinaha ay ka wada shaqeyn doonaan waxyaabo badan oo sii xoojinaya xiriirka labada dal.
Wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha Chang-Ming-Seung ayaa sheegay in Soomaaliya iyo Shiinaha ay yihiin laba dal oo xiriir qoto dheer wadaaga isla markaana dib u furista safaaradda Shiinaha ee Soomaaliya ay sii xoojin doonto xiriirka wada shaqeyneed ee labada dal ka dhaxeeya.
Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in shacabka Soomaaliyeed ay abaal weyn u hayaan shacabka Shiinaha iyo dowladooda, isla markaana dowladda Shiinaha ay Soomaaliya ka taageertay arrimo ay ka mid yihiin beni’aadanimada iyo horumaro kala duwan.
“Tani waxa ay fursad u tahay xoojinta xiriirka Soomaaliya iyo Shiinaha ka dhexeeya, tankale muddo ka badan 20 sano safaaraddii Shiinaha ee Soomaaliya ma shaqeyneynin marka in maanta dib loo furo safaaradda Shiinaha waa talaabo farxad leh, dowladda Shiinaha waxa ay ka midtahay dowladaha taageerada u fidiyasha shacabka iyo dowladda Soomaaliya” ayuu yiri Madaxweynaha dalka.
Ugu dambeyn Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo Wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha ayaa si wadajir ah dib u furay safaaradda Shiinaha ee Soomaaliya.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsRajadii Gooni Isu taaga Somaliland oo Ceel Kudhacday Xog Rasmi ah oo Cadeeyay SiyaasiWatch clever labrador ride bus to the park by HERSELF every time she wants walkiesBooliska AMISOM oo kormeer sameeyay.Howlgal iyo qabqabasho: B/weynePolice: Dad Put 3-year old in Hot Dryer as Punishment